April Fool बनाउने १०१ आइडिया
Aakar April 01, 2010
कसैले भन्नै परेन, आज April 1 हो भनेर । म अस्ति देखि नै याद गरेर बसेको थिएँ । ब्लग मा केही न केही त लेख्नुपर्‍यो, केही हदसम्म दिमाग चाट्नुपर्‍यो भनेर सोचेर बसेको थिँए । आज १ तारिख मैले छोड्ने कुरै भएन, अत: अप्रिल फूल बनाउने आइडिया खोज्ने थाले !
अप्रिल फुल बनाउने त भनियो, तर के मा बनाउने साह्रै कन्फ्युजन मा परियो । अब राजनिति को बारेमा लेखौँ भने पत्याउने कुरा केही हुँदैन, सँधै को अप्रिल फुल ।
खै, कुनै प्लट नै पाइएन, अप्रिल फुल बनाउने ! अप्रिल फुल बनाउने १०१ आइडिया भएको किताब खोज्दा खोज्दा हैरान भएँ तर फेला पार्न सकिन । आइडिया खोज्दा खोज्दै ३ दिन बित्यो, तर केही आइडिया भेटिएन अप्रिल फुल मनाउन ? तपाई कतै अप्रिल फूल बन्नु त भएन ? तपाई सँग केही आइडिया भए सापटि दिनुस् न मलाई, अर्को वर्ष पैँचो तिरौँला ।
मेरो April Fool बनाउने १०१ आइडिया कतै भेट्नुभयो भने भन्नुहोस है मलाई ! अप्रिल फुल त बन्नुभएन, मैले आइडिया दिन्छ भन्ने सोचेर त हेर्दै हुनुहुन्न मेरो ब्लग ! हा हा हा
Happy April Fool 2010.
Nepaliko Aawaz April 1, 2010 at 8:57 AM
हा हा हा ब्रो त सारै बाठो हो |
Basanta April 1, 2010 at 10:28 AM
कुरो रमाईलै हो। १०-१५ प्रतिशत अफू भएँ होला म पनि यो टाँसो पढेर।
badri April 1, 2010 at 11:33 AM
Unknown April 1, 2010 at 12:47 PM
आईडिया लिन आएको आफैं पो फसिएछ पो त हे हे हे:)
ARTS GALLERY April 1, 2010 at 12:58 PM
Chaitanya April 1, 2010 at 5:56 PM
अरुलाई अप्रिल fool बनाएर आफु चाहिं अप्रिल फूल हुने !उत्पातै रिस उठ्यो !अर्को साल म पनि हेरुंला|
शेखर April 1, 2010 at 6:55 PM
हा हा हा , हेर्दैछौँ आकार जी ।
वेदनाथ पुलामी (उमेश ) April 1, 2010 at 7:03 PM
हेहेहे ... आकार जी ! कतै भेट्नु भएन है ... फुल बनाउने आइडिया ..??
लौ यो लिंक मा जानुस ...WWW.101idea.kobhandako.com
full enjoy गर्नुस है ......
ametya April 1, 2010 at 10:01 PM
पोहोर साल मेरो बिहे भनेर निमन्त्रणा दिएर KTV को रुपेशजीलाई april fool मनाको याद आयो । यो साल त्यतिकै गयो ।
Me April 2, 2010 at 7:52 AM
April 1st ma nabhaye ni 2nd ma chai fool bhaye hehe
ametya November 12, 2010 at 4:08 AM
Arts Gallery November 12, 2010 at 4:08 AM
badri November 12, 2010 at 4:08 AM
yubraj marasini April 1, 2012 at 7:28 AM
maile share garnu paro......
©बाबाजी™ April 1, 2013 at 10:31 AM
दैबले बेकारमा अप्रिल फुल मनाए !! हत्तेरी !!!